Nepal Auto इलेक्ट्रिक सवारीका लागि चार बाइक कम्पनीले स्वापेबल ब्याट्री स्ट्यान्डर्ड निर्माण गर्ने - Nepal Auto
इलेक्ट्रिक सवारी साधनका लागि आवश्यक स्वापेबल ब्याट्री स्ट्यान्डर्ड निर्माण गर्ने वारेमा चार मुख्य मोटरसाइकल ओईएमले एक सम्झौता गरेका छन् ।
सो सम्झौता अनुसार होन्डा, यामाहा, केटीएम र पियाजियोले यस सम्बन्धी सम्झौता गर्ने समझदारी गरेका छन् । यसका लागि स्वापेबल ब्याट्री कन्सोर्टियम निर्माण गरिने छ, जसले मोटरसाइकल र हलुका इलेक्ट्रिक सवारी साधनका लागि कार्य गर्नेछ ।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकास गर्नका लागि हाल भइरहेका अप्ठ्याराहरुलाई हटाउने गरी आवश्यक कार्य गर्ने समेत यी चार कम्पनीले योजना बनाएका छन् ।
यो भन्दा पहिले होन्डा र यामाहाले सुजुकी र कावासाकीसँग मिलेर यस सम्बन्धी नयाँ प्रविधि विकास गर्ने घोषणाका साथ अगाडि बढिसकेका छन् । अब होन्डा र यामाहाको केटीएम र पियाजियोसँगको समझदारीले स्वापेबल ब्याट्री सिस्टमका लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेसनलाई अझै प्रस्ट्याउने छ ।
चारै कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यस अन्तर्गत मोपेड, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल र क्वाड्रिसाइकलका लागि समेत यसले फाइदा पुग्ने छ । यसका लागि इन्टरनेसनल टेक्निकल स्ट्यान्डर्डको विकास समेत गरिने छ ।
योजना अनुसार अगाडि बढेमा आगामी मे २०२१ देखि नै यसतर्फको कार्य शुरु हुनेछ । त्यसपछि इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि आवश्यक प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार हुनेछ । यस अन्तर्गत ती सवारी साधनलाई टिकाउ बनाउन, चार्जिङ समयमा सुधार गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न र ग्राहकले सस्तो मूल्यमा उपयोग गर्न सकिने बनाउनका लागि विभिन्न उपायको खोजी गरिने छ ।
यसबाट भविष्यमा कम्बसन इन्जिनयुक्त गाडीबाट इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोगतर्फ अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास हुने विश्वास गरिएको छ ।
यी चार कम्पनीले यसका लागि अन्य जुनसुकै कम्पनीले पनि सहकार्य गर्न सक्ने बताएका छन् । यद्यपि यो योजना सफल होला वा नहोला ? भविष्यमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनलाई अहिले भन्दा फरक तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएला त ? यसका लागि भने केही वर्ष कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।